အသည်းက အဆိပ်အပုပ်တွေ သာမက ဝမ်းဗိုက်ထဲက အပူအပုပ်တွေ ရှင်းလိုလျှင် – GuGuGarGar
တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် အဆိပ်အပုပ်ထုတ်တဲ့ အစီအစဉ်အရ အခုအပတ်မှာ အလှည့်ကျတာကတော့ အသည်း ကိုဆေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသည်းဟာ အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်သလို အလုပ်အများဆုံးသော ကလီစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စားအမျှအစာတွေ က အဆိပ်တွေကိုဖြေပေးရပါတယ်။နေ့စဉ်စားေ နတဲ့အစာေ တွထဲမှာအဆိပ်ေ တွကအများကြီးပဲ။ဒါကြော င့်အသည်းကောင်းဖို့သိ ပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အသည်းကိုဆေး ဖို့အကောင်းဆုံးကေ တာ့မန်ကျည်းဖျော် ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးဟာအ သည်းအတွက် သဘာဝကပေးထား တဲ့ဆေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကိုနု ပျိုစေပါတယ် ။အသည်းခြော က်ခြင်း၊ ကျုံ့ခြင်း၊ကြွပ်ခြ င်း၊ဆတ်ခြင်း ၊ပုပ်ခြင်းတွေမဖြစ်ေ အာင်ကာကွယ်ေ ပးပါတယ်။ အခုခေတ်မှာBပိုးCပိုးH ပိုးစသြည်ဖင့်ဖြစ် ကြတာဟာအသ ည်းပုပ်လို့ပါ။ ပိုးဆိုတာပု ပ်မှတွယ်တာပါ။ မပုပ်ရင်မတွယ်ပါဘူး။
အဲ့လိုပိုးမတွယ်ေ အာင်အသည်းကိုေ ဆးကြောပေးဖို့လို ပါတယ်။ရိုးရိုးလေး ပါပဲ၊မန်ကျည်းဖျော်ရ ည်သောက်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်းမှည့်လက် တစ်ဆုပ်၊ထန်းလျှက် သင့်ရုံ၊ဆားအနည်းငယ် ကိုမတ်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးေ ရနွေးဆူကိုလောင်းထည့်ပါ။
မနက်ထဲကနှပ်ထားရင်ညနေ ဆိုသောက်လို့ရပါပြီ ။ဆန်ကာနဲ့စ စ်လိုက်ရင်အရသာရှိတဲ့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်ကိုရပြီပေါ့။ သံပရာသီး ကြိုက်ရင်ညှစ်ထ ည့်၊အေးအေးလေးသော က်ချင်ရင်ရေ ခဲထည့်သောက်ပါ။
အသည်းကအ ဆိပ်အပုပ်တွေသာ မကဝမ်းဗိုက်ထဲက အပူအပုပ်တွေ လည်းထွက်သွားပြီးလူကပေါ့ ပါးလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဆိပ်အပုပ်အပူအစပ်တွေကင်း ရှင်းသွားတော့ေ သွးသား သန့်စင်ြ ပီးအ လှတွေလည်းတိုးပြီပေါ့။
ချစ်ခင်လေးစားလျှက်.်……. Via Min Kyaw Win
တဈပတျ တဈကွိမျ အဆိပျအပုပျထုတျတဲ့ အစီအစဉျအရ အခုအပတျမှာ အလှညျ့ကတြာကတော့ အသညျး ကိုဆေးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ အသညျးဟာ အရေးကွီးတဲ့အင်ျဂါတဈခုဖွဈသလို အလုပျအမြားဆုံးသော ကလီစာလညျးဖွဈပါတယျ။
စားအမြှအစာတှေ က အဆိပျတှကေိုဖွပေေးရပါတယျ။နစေ့ဉျစားေ နတဲ့အစာေ တှထဲမှာအဆိပျေ တှကအမြားကွီးပဲ။ဒါကွော ငျ့အသညျးကောငျးဖို့သိ ပျအရေးကွီးပါတယျ။ အသညျးကိုဆေး ဖို့အကောငျးဆုံးကေ တာ့မနျကညျြးဖြျော ရညျဖွဈပါတယျ။ မနျကညျြးသီးဟာအ သညျးအတှကျ သဘာဝကပေးထား တဲ့ဆေး လညျးဖွဈပါတယျ။
အသညျးကိုနု ပြိုစပေါတယျ ။အသညျးခွော ကျခွငျး၊ ကြုံ့ခွငျး၊ကွှပျခွ ငျး၊ဆတျခွငျး ၊ပုပျခွငျးတှမေဖွဈေ အာငျကာကှယျေ ပးပါတယျ။ အခုခတျေမှာBပိုးCပိုးH ပိုးစသွညျဖငျ့ဖွဈ ကွတာဟာအသ ညျးပုပျလို့ပါ။ ပိုးဆိုတာပု ပျမှတှယျတာပါ။ မပုပျရငျမတှယျပါဘူး။
အဲ့လိုပိုးမတှယျေ အာငျအသညျးကိုေ ဆးကွောပေးဖို့လို ပါတယျ။ရိုးရိုးလေး ပါပဲ၊မနျကညျြးဖြျောရ ညျသောကျပေးရုံပဲဖွဈပါတယျ။ မနျကညျြးမှညျ့လကျ တဈဆုပျ၊ထနျးလြှကျ သငျ့ရုံ၊ဆားအနညျးငယျ ကိုမတျခှကျထဲမှာထညျ့ပွီးေ ရနှေးဆူကိုလောငျးထညျ့ပါ။
မနကျထဲကနှပျထားရငျညနေ ဆိုသောကျလို့ရပါပွီ ။ဆနျကာနဲ့စ ဈလိုကျရငျအရသာရှိတဲ့ မနျကညျြးဖြျောရညျကိုရပွီပေါ့။ သံပရာသီး ကွိုကျရငျညှဈထ ညျ့၊အေးအေးလေးသော ကျခငျြရငျရေ ခဲထညျ့သောကျပါ။
အသညျးကအ ဆိပျအပုပျတှသော မကဝမျးဗိုကျထဲက အပူအပုပျတှေ လညျးထှကျသှားပွီးလူကပေါ့ ပါးလနျးဆနျးသှားပါလိမျ့မယျ။ အဆိပျအပုပျအပူအစပျတှကေငျး ရှငျးသှားတော့ေ သှးသား သနျ့စငျွ ပီးအ လှတှလေညျးတိုးပွီပေါ့။
ခဈြခငျလေးစားလြှကျ.ျ……. Via Min Kyaw Win
မိတ်ဆွေ…သင်ဟာ ပိတုန်းလို လူလား ဆင်လိုလူလား
ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိလို့ လုံးဝမစားသင့်တဲ့ ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ( ၅ ) ခု